आरएसडीसीको ६०% हकप्रद भर्ने म्याद ३ दिन मात्र बाकी, फारम भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » आरएसडीसीको ६०% हकप्रद भर्ने म्याद ३ दिन मात्र बाकी, फारम भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौं - आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ६०% हकप्रद भर्ने ३ दिन मात्र बाकी रहेको छ । कम्पनीले गत असार १७ गते देखि कुल २१ लाख ५९ हजार ७०० कित्ता हकप्रद सेयर खुला गरिएको छ । यसमा जेठ २१ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटलको लाजिम्पाट, लगनखेल र लालदरबार काठमाडौं तथा पोखरा, बुटवल, वीरगञ्ज र विराटनगरमा रहेका कार्यालयबाट हकप्रद भर्न सक्नेछन् । आरएसडीसीको बुटवल कालिकानगर कार्यालयबाट पनि हकप्रद भर्न सकिनेछ ।
यसैगरी, आस्वा प्रणालीमा सहभागी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि आवेदन दिन पाइन्छ । हाल आरएसडीसीको चुक्ता पुँजी ३५ करोड ९९ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रदपछि चुक्ता पुँजी ५७ करोड ५९ लाख २० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
प्रकाशित : Thursday, August 02, 2018